Microsoft SQL Server iri kuswedera padyo nekushandisa paGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Joaquin Garcia | | Sisitimu Yekutonga, Noticias, Zvirongwa
Gore rakapfuura Microsoft yakazivisa kusvika kweSQL Server kune iyo Gnu / Linux nyika. Kuuya kwakamirirwa kwenguva refu nevazhinji vanoda kushandisa chaiwo Windows zvirongwa muGnu / Linux uye vasingakwanise nekuda kwekushaikwa kweiyi tekinoroji
Munguva pfupi yapfuura Microsoft yakaburitsa kuburitswa kwemumiriri kweSQL Server yeLinux, vhezheni yekuvandudza pamberi peiyo vhezheni yekupedzisira. Mune mamwe mazwi, isu tinogona kukurumidza kuva neiyi tekinoroji yakagadzirira yedu Gnu / Linux server kana komputa.
SQL Server yeLinux ichaita iyi dhatabhesi yeMicrosoft iuye kuGnu / Linux asiwo ichagonesa Microsoft kukwikwidza zvinobudirira kupokana neOracle uye MySQL. Kuburitswa kutsva kunoita kuti tione kuti mazhinji masevhisi eMicrosoft anozokwanisa kubatana nekombuta yeLinux nekuda kweiyi tekinoroji uye Samba.
SQL Server yeLinux yave kuda kuve yechokwadi
Saka isu tinogona kugadzira iyo SQL server batanidza kune Anoshanda Dhairekitori kana SISS masisitimu. Ichi chichava chimwe chinhu chinofarirwa nevazhinji manejimendi manejimendi, avo vanogara vaine matambudziko ekubatanidza maseva eGnu / Linux nemaseva eMicrosoft.
Unogona kuwana anonunurwa SQL Server kuburikidza neizvi link. Ikoko iwe unowana iyi vhezheni, vhezheni iyo ichiri mukuvandudza uye ndeipi haina kukurudzirwa kuti ishandiswe mumidziyo yekugadzira, nekuda kwematambudziko ayo aanogona kukonzera. Chero zvazvingaitika, kana ikashanda mumushini chaiwo kuti uone kuti ndezvipi zvinhu nemabasa ainounza uye kuti ndeapi mashandisiro atinogona kushandisa kana kugadzira nawo eGnu / Linux.
Microsoft SQL yakasimba uye inonakidza tekinoroji yedhatabhesi asi iwe unofanirwa kuyeuka kuti kushandisa dhatabhesi, isu tinofanirwa kufunga nezve izvo zvinodiwa kwete simba rehunyanzvi. Ndokunge, sekuwanda kuri kuda Microsoft, mune dzimwe nguva hatizofanirwe kushandisa SQL kumabasa edu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Microsoft SQL Server ichiswedera padhuze nekushandiswa paGnu / Linux
Mhoro asi ndeipi yauri kutora, ndinofungidzira kuti ndiye ane graphic uye kwete iyo inoshandiswa nemutsetse wekuraira nekuti mawindoceros akafa ivo vakajaira chikamu chemifananidzo, hazvo ikozvino ndinovimba vanoburitsa studio yekuona mu linux uye kwete ini ndinoreva iwo edhita edhita. maererano
Ini handivimbe neMicrosoft uye chekupedzisira chandingaite kuikurudzira.